September 2016 - Page 30 of 31 - Sawirrotv
Qosolkii Muuse Suudi Yalaxow (VIDEO)
Muuse suudi ayaa hadal karbaash ah ku tuuray qurbajoogta Soomaalida, Sheegayna in ay xilal doon yihiin, laakii aysan fahansanayn shaxda siyaasadeed ee ka socota gudaha dalka Soomaaliya. Hogaame kooxeedkii hore ayaa tusaale ahaan u soo qaatay oo ka sheekeeyey caruur yar oo qurbaha ka yimid oo ari carbeedka Muqdisho ku wareeray, wuxuuna sheegay in qurbo …
Tarsan oo Jen. Gabre Baaq u Diray (VIDEO)
Tarsan ayaa marka hore bulshada ku dhaqan Gobolada Shabellaha Dhexe & Hiiraan ugu baaqay inaanay marnaba ogolaanin in maamul uu u sameeyo jeneraal Gabre. Tarsan ayaa ka dhawaajiyay in Gabre uu dalka Soomaaliya ka yahay dembiile, markii uu dad ku laayay. Dadka uu ku laayayna waxaa uu Tarsan sheegay inuu ku jiray walaalkii, da’dii ka …
Ra’iisul Wasaare ku Xigeenka Dalka oo la Kulmay Madaxa EU ee la Dagaalanka Burcad Badeeda (VIDEO)
September 02, 2016 – Ra’iisal Wasaare u Xigeenka dalka Soomaaliya mudane, Maxamed Cumar Carte ayaa maanta kulan la qaatay Madaxa Hawlgalka Midowga Yurub ee la dagaalanka burcad badeeda, Major General Rob Margowan, waxayna ka wada hadleen sidii loo ciribtiri lahaa kooxaha burcad badeeda. Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in xukuumadiisa ay doonayso inay ka hor tagto …
Carte iyo Madaxa Midowga Yurub (VIDEO)
Maxamed Cumar Carte ayaa sheegay in xukuumadiisa ay doonayso inay ka hor tagto dib u soo laabashada Burcad badeedii Soomaaliya, si loo ciribtirana ay muhiim tahay in shaqo abuuris loo sameeyo dhalinyarada shaqa la’aanta ah. Ugu danbeyntii Ra’iisal wasaare ku xigeenka ayaa ku dhiirageliyay sarkaalka ka socday Midowga Yurub inay sii laba laabaan howsha ay …
Tarsan oo Sheegay in Al Shabaab uu Sanad Gudihii Dalka Uga Tirtirayo Hadii…(Dhagayso)
September 01, 2016 – Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir mudane, Maxamuud Axmed Tarsan ayaa waxa uu sheegay in hadii Xisbigiisa uu ku guulaysto xukunka dalka ay Al shabaab mudo sanad gudihiis ah dalka uga tirtirayaan. Tarsan oo ah musharax ka qaybgalaya tartanka madaxweynenimo ee dhawaan dalka ka dhacaya, ayaa sheegay inuu hayo Xeelad dagaal oo looga …
Baaqa Shirka Hiiraan & Sh/Dhexe (VIDEO)
Baaqani ayaa yimid kadib markii R/wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha C/raxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ay kulan la qaateen Wakiilka Urur Goboleedka IGAD Maxamed Cabdi Afeey. Wakiilka Urur Goboleedka IGAD ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Afeey, ayaa dhinaciisa xusay in IGAD ay Dowladda Soomaaliya ka caawinayaan sidii uu dib ugu furmi …
Maamulka Puntland oo Maanta ku Dhawaaqay in la Joojiyay Gawaarida ka Timaada Koonfurt dalka Soomaaliya (VIDEO)
September 01, 2016 – Afhayeen u hadlay Maamulka Puntland ayaa shaaciyey inay xireen xuduudaha ay la wadaagaan gobolada koonfureed iyo kuwa bartamaha Soomaaliya. Cabdullaahi Maxamad Jaamac Quraan jecel oo ah afhayeenka maamulka Puntland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe, ayaa sheegay in Puntland laga bilaabo maanta ay fulin doonto amaradii ay ku soo rogtay gawaarida ka …
Puntland iyo Gawaarida Koonfurta (VIDEO)
Cabdullaahi Maxamad Jaamac Quraan jecel oo ah afhayeenka maamulka Puntland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Garoowe, ayaa sheegay in Puntland laga bilaabo maanta ay fulin doonto amaradii ay ku soo rogtay gawaarida ka yimaada gobolada Koonfureed ee Soomaaliya, ayna xirtay xuduuda ay la wadaagto maamulka Galmudug, isla markaan aysan aqbali doonin gaadiid ka soo gudba …
Madaxweynaha Dalka Tanzania oo Maanta Warqadaha Aqoonsiga ka Gudoomay Safiirka Cusub ee Soomaaliya (SAWIRRO)
September 01, 2016 – Madaxweynaha dalka Tanzania Mr. John Magufuli ayaa maanta Safiirka cusub ee Dowlada Soomaaliya u magacawday dalka Tanzaaniya, Danjire Mohamed Hassan Abdi ka gudoomay Warqadaha Aqoonsiga Safiirnimo. Safiirka oo lagu soo dhaweeyay Qasriga Madaxtooyada dalka Tanzaania ayaa salaan sharaf ka qaatay Cutubyo ka tirsan Ciidanka ilaalada Madaxtooyada, waxaana xiligaas kadib loo sii gudbiyay …
Suuqa Soomaalida Islii ee Dalka Kenya oo Maalintii Labaad Xiran (Dhagayso)
September 01, 2016 – Sida aan wararka ku heleyno xiisad ayaa weli ka dhextaagan ganacsatadada waaweyn iyo kuwa yar yar ee Suuqaasi xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku ganacsato. Wararka ayaa sheegaya in aan weli heshiis laga gaaran is maandhaafka ka taagan suuqaasi uuna maalintii labaad suuqa weyn ee Islii yahay mid xiran, islamarkaana aan jirin …